Any Alemaina: zazavavy mihaona-tormentors ary nandositra indray ho Iraka manokana — Sputnik Alemaina
Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny fiainana manokana ny politika. Izy nihevitra tao Alemaina ao amin’ny fiarovana. Fa avy eo dia nihaona eto DIA ny lehilahy iray, izay izy no efa amidy eny an-dalambe. Ny polisy atao momba ny mpitady fialokalofana, na inona na inona. Ny zazavavy dia nandositra avy amin’ny tahotra indray ny Iraka. Fa na dia misy, izy dia ao amin’ny loza. Ankehitriny Aschach te-ho any amin’ny fianakavianao any Aostralia ny hifindra monina. Izy ireo no namono, naiditra am-ponja, ny fanandevozana, ny firaisana ara-nofo, herisetra, ary amidy. Ny hanjo Yazidis any amin’ny firenena izay ny mpampihorohoro milisy fanjakana Islamika (DIA) mampihetsi-po an-kalalahana, dia mahatsiravina. Tatitra ao DIA-ho babo Yazidi tovovavy sy ny vehivavy no nitarika tany Alemaina ao amin’ny taona farany, ny fampidirana manokana izay anjara-fanompoana ny vehivavy. Ny ela mba ho taona Aschach H. iray ireo zazavavy ireo. Izy tonga any Alemaina, mihevitra ny tenany ho ao amin’ny fiarovana izy, ary nanao ny zava-nitranga izay zava-dehibe ho an’ny mihorohoro ireo niharam-boina ny ratsy indrindra: izy dia nihaona tamin’ny Abu H, tao ny ratsy, tao ny tormentors, mba hijoro araka ny teny, amin’izao fotoana izao, amin’ny maha-mpitady fialokalofana any Alemaina. Gander Sputnik-lahatsoratra: Berlin-monina, teo Aloha, mpiandraiki-draharaha ho an’ny vahiny: Alemà tokony ho hitantsika, toy ny vitsy an’isa, dia matahotra ny olona ianao mitsikilo. Efa fantatra ny endriny mazava tsara, nefa nilaza fa sarotra ny tsy ho tonga any Alemaina. Avy eo aho dia niteny tamin’ny reniko aho fa nahita olona izay mijery toy ny DIA-olona. Ry Mama hoe: afaka tsy matahotra izany izy. Any Alemaina, dia tsy misy, toy izany koa ny Jesidin. REUTERS Jon Nazca Vienne:»ny fifindra-monina faobe dia ny fandrahonana lehibe indrindra». Tamin’ny volana febroary, dia nanomboka ny fiofanana any amin’ny salon hanao volo. Ny andro manaraka amin’ny dona: Ny lehilahy iray dia indray saingy tamin’ity indray mitoraka ity be mavitrika kokoa: Dia nanatona ahy ary nilaza hoe: Mety aho mangataka zavatra araka ny zatovovavy iray.
Ary efa fantatro fa izy ilay lehilahy.
Hoy izy: Ianao Aschach
Hoy aho hoe: tsia, tsy azoko Aschach iza ianao. Hoy izy: Fa, ianao Aschach ary izaho Abu H. izy nampahafantatra ny zava-niseho ny mpiasa sosialy ary taty aoriana dia ny lehiben’ny Waiblinger polisy. Izy no nanome ahy ny isa sy ny hoe: Raha ity lehilahy ity, indray mandeha indray, jereo, dia mila miantso antsika. Izy nahita azy in-droa, ny polisy namorona ny endriky ny mpanao ratsy. Avy eo aho dia niandry iray volana sy tapany. Tsy nanao na inona na inona ratsy, dia milaza ny tovovavy. Ny mpampianatra azy, izay efa lasa ary koa, efa nilaza hoe: Raha Iraka dia tsara kokoa ho anao no, avy eo ianao raha tsy mandeha, dia tsy hijanona, ary izahay mijery anao. Ny zazavavy, dia nandeha ho any Iraq. Ankoatra ny toe-Draharaha any Alemaina, fa efatra ny anabaviny vao haingana no nafahana avy tamin’ny fahababoana, ary izy no te hitsidika azy ireo tao Iràka. Ny mpiasa ara-tsosialy dia nilaza fa Aschach navela hijanona hatramin’ny enim-bolana ao Iràka. Amin’ny kely indrindra dia tsy tsy maintsy miverina, fa raha tsy izany dia tsy miasa. Fa hiverina ho any Alemàna dia ho Aschach, tena haingana intsony ny olana. Gander Sputnik-lahatsoratra: ianao dia tsy hanana valisoa any Alemaina: Facebook vato mpitsikera ny finoana Silamo aho Rehefa tsy milaza aho fa nilaza tamin’ny mpiray tampo amiko sy ny raiko, raiko, fa izy te ahy handeha hiverina ho any Alemàna, toerana io ny olona, toy izany koa ny tovovavy iray izay efa nandritra ny efa ho efatra volana ao Iraka, ary mety ho tamin’ny volana oktobra lasa any Alemaina. izany no ho anao: na ahoana na ahoana, dia tsy mandeha intsony, na inona na inona no mitranga ankehitriny. Izany ihany koa ny adin-tsaina ny zava-dehibe izay tianao na inona na inona zava-nitranga ity, fa tia misaotra ny rehetra namany, izay efa nataony be ho anao ary ianao dia hatao. AP sary Manu Islamista any amin’ny toeram-pitsaboana ao amin’ny vondrona EOROPEANA sy Suisse, Fa ny hijanona ao Irak dia tsy ho Jesidin koa tsy mampidi-doza. Satria na dia tonga izy sy ny fianakaviany, monina any Iràka ihany koa ny ampahany lehibe iray ao amin’ny fianakaviana ny DIA-ny olombelona, tao Baghdad, toy ny tovovavy nilaza. Ary toy ny fianakaviana lehibe, ka ankehitriny dia afa-miala amin’izany, na ireo mpikambana na ireo efa nividy, nefa dia mbola tao amin ny fahababoana sy tsy manana fifandraisana amin’ny rehetra, ny ankizivavy.
Efa be ny tahotra
Mila miala Iraka, fa tsy ny Alemana. Fa tsy, ianao mijery any Aostralia. Roa Br sy ny rahavavy iray Aschachs efa monina any. Tena tia anao dia noho ny fianakaviana manontolo any. Ny raharaha moa ankehitriny ny nankinina amin’ny Mpampanoa lalàna Federaly tao Karlsruhe, hatreto, miaraka amin’ny mampieritreritra ny vokany: Hatramin’izao, isika no tsy niezaka ny hamantatra ny nanatanteraka ny ilaina ny fandriampahalemana, ny mampahafantatra ny asa fanaovan-gazety mpitondra tenin’ny biraon’ny Mpampanoa lalàna Federaly manohitra ny Sputnik. Ny tranga dia tsy mbola vita. Bebe kokoa ny raharaha ny amin’ny Yazidi zazavavy Aschach ary ny ZAVA-tormentor ny zoma, Sputnik ny Vaovao, Isika no manolo-tena ho amin’ny fiarovana ny angon-drakitra manokana. Efa nohavaozina ny fanambarana fiainana manokana noho izany fa, amin’ny Ankapobeny ny tahirin-kevitra fiarovana ny lalàna (DSGVO), vaovao EU lalàna, ny eo.
Mety tsy dia manan-kery
Miangavy anao familiarize ny tenanao miaraka amin’ny fanambarana fiainana manokana. Misy Antsipirihany mikasika ny karazana vaovao dia manangona, ahoana no mampiasa azy, ary ny momba ny zon’olombelona, mikasika ny angona fiarovana. Satria efa nilaza taminay ny angon-drakitra manokana, araka izay efa namorona ny Kaonty manokana, mba jereo ny efajoro eto ambany ny mampiasa izany bebe kokoa: Raha tsy te antsika bebe kokoa ny dingana ny tahirin-kevitra, dia tsindrio eto azafady mba hamafa ny Kaonty. Raha toa ka manana fanontaniana na ahiahy mikasika ny Fanambarana fiainana manokana, ny fifandraisana. Ny fisoratana anarana sy ny fahazoan-dalana ao ny Mpampiasa ny Sputnik-tranonkala ny kaonty mpampiasa na ny mpampiasa kaonty ao amin’ny tambajotra sosialy, dia ny fankatoavana ireo fitsipika ireo. Ny Mpampiasa dia manaiky ny tsy mandika ny azo ampiharina ny lalàna ny amin’ny Federasiona rosiana sy nyna ny iraisam-pirenena ny lalàna sy ny lalàna momba ny vahiny amin’ny Firenena ny zavatra nataony. Ny Mpampiasa dia tsy maintsy Maneho ny hafa ny adihevitra ny mpandray anjara, ny mpamaky ary ireo olona voalaza ao amin’ny votoatin’ny hafatra, amim-panajana. Ny Fitantanana no mitondra ny lohateny hoe mba hamafa ireo fanehoan-kevitra hafa fiteny, amin’ny ampahany lehibe indrindra amin’ny votoaty-tsoratra. Amin’ny fiteny rehetra dikan ny tranonkala Sputnik ny Vaovao azo ovaina amin’ny alalan’ny Mpampiasa namela fanehoan-kevitra. Ny Fitantanan-draharaha dia manan-jo ny ho tsy mety, tsy misy filazana mialoha ny Mpampiasa, ny fidirana amin’ny lafiny na ao amin’ny Ny raharaha ny fandikana ny fanehoan-kevitra fitsipika ho an’ny Mpampiasa, na amin ny mamantatra ny famantarana toy izany dia fanimbana ny Mpampiasa hamafa ny mpampiasa kaonty
← Maimaim-poana ny Lahatsary amin'ny Chat mampifandray ny vahoaka amin'ny alalan'ny Webcam
Izay mba hihaona vehivavy: amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto vato nasondrotry ny tokan-tena →